Maxsuulkii Nabada Siilaanyo oo Noqotay Afduub loo geysto Beellaha Axmed Faarax | Saraarnews
Hargeysa(saraarnews) Maleeshiyo Reer Buuhoodle ah ayay wararka na soo gaadhayaa sheegayaan inay galabta Deegaanka Sool-joogto ee ay Ciidamadda Qaranku ka soo guureen ku af-duubteen shan Nin oo u dhashay Barriga Burco gaar ahaana Beesha Axmed Faarax.
Illaa hada nimankaas la af-duubtay lama garanayo meel ay Maleeshiyadu la tagtay hase yeeshee wararka Hordhaca ah ee ay soo tabiyeen waxa ay sabab uga dhigayaan Af-duubkooda inay u sameeyeen Koox Argagixiso ahayd oo uu Hormood u yahay Jaamac Kuutiye oo ay doonayeen in Maxaabiista la soo daynayo loogu soo daro oo laga Reebay.
Waxaanay intaas raacinayaan sida ay fariimaha ay soo dirayaan sheegayaan in shanta nin ee ay Af-duubteen ugu aaari doonaan haddii aan la soo daynay maxaabiista kale ee Jeelasha Somaliland ku jirta. Waxaanay eeda diidmadda maxaabiista ay doonayeen dusha ka saarayaan Wasiirada Xukuumada oo ay ku eedaynayaan inay hor istaageen soo dayntooda sidaas daraadeedna ay u af-duubteen shanta nin maadaama ay wasiirada qaarkood isku jufo hoose yihiin.
Ma jiraan warar kale oo madax banaan oo ka soo baxaya Xukuumadda Somaliland iyo kooxdii Xagla toosiye ee Heshiiska Nabadeed wada gashay arrintan waxa ay ka yeelayaan, hase yeeshee dadweynaha Reer Somaliland ee falanqaynayay wadahadaladii iyo Heshiiskii labada dhinac waxay intooda badani u arkayeen inuu yahay mid weyd ah oo aan laga abaarin halkii ay boogtu ka dawaysmi lahayd.
Taasna waxa si weyn looga dheehday laba odhaahood oo ka soo baxay Saleebaan xagla Toosiye iyo Garaadkii la socday oo si cad u iftiimiyay inaanay damaanad qaadi Karin Masiirka Reer Buuhoodle iyo xalinta dhibaatadii deegaankaas ka dhacday oo ay sheegeen inay tahay arrin dhaqan oo u taala dadkii wax kala gaadheen balse iyagu ay yihiin Siyaasiyiin Gogoshii Nabada ee Madaxweyne Siilaanyo fulinaya.
Si kasta ha ahaatee dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horaysay ee la filanayay inay dhici doonto. Waxaana laga war sugi doonaa halka ay biyo dhigto iyo falka ay ka qaadaan labadii dhinac ee Heshiiska wada galay.
Waxa aanu goor dhaw idiin soo gudbin doonaa wixii macluumaad ah ee aanu ka helno dadkaas la af-duubay.